umzimba zokwelapha e hernia umgogodla yakhelwe ukwenza ngcono isimo lesiguli kanye ukuphulukisa yokugula kwakhe. Futhi ngosizo nezinqubo ezidingekayo, ungakwazi letfutfukisa imisipha yakho welulele yomgogodla. Isakhiwo umzimba (Physiotherapy) kungenzeka ebekwe udokotela ukuba khona ukuze avimbele izifo zayo yonke iminyango corset emuva.
Kuyini umbhunu umgogodla
A hernia a look kanzima ngesikhathi displacement we disc intervertebral libhekene ukubonakaliswa sebuhlungwini obunzima, ezingasetshenziswa kakhulu ukunciphisa izinga lempilo. Lesi isifo esibi, futhi kubalulekile ukusebenzisa njengoba umbhunu ezingamahlalakhona kudinga ukuhlinzwa. Noma kunjalo Physiotherapy nge umbhunu umgogodla iyasiza. Kungaba ukunciphisa iziqephu ubuhlungu ngisho isidingo ukuhlinzwa.
Lokhu iqoqo umzimba kuncike nesigaba lesi sifo futhi inkinga emgogodleni ingxenye. Futhi uyakucabangela amakhono ngabanye abantu, ikakhulukazi isimo sakhe esingokomzimba, yobudala.
ikhasi lesikhwama sasekhaya (Physiotherapy) alikho ngempela isilinganiso ukukhalima, ngoba ayilingani konke. Kuyinto, kunalokho, ukuvuselelwa izinyathelo, edinga indlela ngamunye isiguli ngasinye. Ukuze kokuphothula kwesikhathi nokuvuselelwa kwadinga ukubekezela nokukhuthazela ubekezele, njengoba kungenzeka ezinye umzimba unikezwa ngobukhulu ubunzima, kodwa kudingekile.
umzimba zokwelapha e hernia umgogodla senzelwe ukudambisa izinhlungu zibe imisipha, ukuqinisekisa efanele ukugeleza kwegazi. Futhi ukuthuthukisa umzimba kwezicubu ezithambile we emuva, ukubuyisela kanye nokuqinisa imisipha isakhiwo ithambo.
umsebenzi zokwelapha emuva has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo. Ngaphambi kokwenza zalezi umzimba udinga ukuthi uyoqeda ubuhlungu. Futhi, kuzomele ulandele yonke imithetho ezinikezwe imiyalelo, njengoba umzimba okungalungile ngeke nilingenise inzuzo futhi singase silimaze.
Yini okufanele uzibheke
umzimba zokwelapha e hernia umgogodla kudinga nokuqikelela ukuba imizwa yakho. Kuyadingeka ukwenza kuphela labo umzimba ukuthi musa babhebhethekise isimo futhi ungasingenisi ubuhlungu. Kusukela protrusion we disc umgogodla engenzeka noma kunjalo, odokotela batusa kakhulu ukusebenzisa izinto ezikhethekile kuphela, okuyinto Ungasingenisi ngokuphazamiseka okukhulu, ngoba ziwusizo ngempela isimo sakho.
Nokho, kwenzeka ukuthi imfundo ngokomzimba ngesikhathi i hernia intervertebral eletha ukungakhululeki lula. Kulokhu, lo umsebenzi kwenziwe ngokucophelela nangokucophelela. Kodwa uma ubuhlungu obukhulu ngemuva, kufanele asiyeki ukusebenza kuze kufike leso sikhathi lapho isimo sakho ngcono kancane. Uma emva sebebuye baqeqeshwa isikhathi ukuphinda lesi sivivinyo, futhi ngeke esinda kakhulu futhi kubuhlungu ngawe - uthuthela endaweni efanele.
Phakathi umsebenzi wokuqala, gwema izikhundla ukuthi kukhona ekugcwalisekeni 'ezimazombe umzimba ", kanye nemidlalo asebenzayo nomunye umsebenzi ngokomzimba esibandakanya ukweqa. Gwema jolts kanye uhlevane emhlane.
Lokwelapha ngokuvivinya umzimba hernia kudinga amakilasi elivamile, okungukuthi obonisa kusukela ezikhathini 2 kuya ku-6 emini. Sabalalisa eziningi ezahlukene eziyinkimbinkimbi ngezikhathi ezahlukahlukene: ekuseni, ntambama nakusihlwa. Ungenzi yimuphi ukunyakaza kungazelelwe futhi ungasebenzisi amandla ezindaweni lapho kwakukhona izinkinga yomgogodla, uqale ukuzilolonga amplitude ubuncane nomthwalo. Khulisa kubo kancane kancane.
Musa azame ukuthola usuku olulodwa, ngoba ungatholi ngokushesha ngakho "kwesokudla" zonke amathambo futhi akwazi ukugcina. Buyisela impilo yakho ngomusa, kancane kancane zandise kwegazi igazi engxenyeni okungenamsoco emhlane.
Gymnastics okwesikhathi disc herniated
imfundo Physical at hernia kuhilela izivivinyo ezilandelayo:
Ukusebenzisa wokuqala kwenziwa elele phansi ngesisu sakho. Thatha isikhundla kokuqala: imilenze yomibili ugcine kancane ohlukanisile. Gobisa amadolo akho, izandla, ugone iqakala uyaziveza ngasemsileni uya ekhanda. Lo msebenzi ngeke kukusize okokuqala, kodwa kumelwe sizame nekuwusebentisa, ngoba lusenza siqiniseke yomgogodla, okwenza kube nezimo xaxa.
Isibonelo esilandelayo kancane like lowo odlule. Ukuqala isikhundla: Lala ngesisu sakho, ukunciphisa izithende zakho ndawonye. Ngomusa uphakamise umzimba, wamshaya ikhanda lakhe emuva. Uma ucindezelwa emhlabeni inkaba - ukuthi wenze noma yini efanele. Lesi sikhundla ikakhulukazi ewusizo kubantu abaphethwe umbhunu esifundeni lumbar, emgogodleni wesibeletho thoracic.
Khona-ke sisebenzela Ezansi yomgogodla. Lala ngesisu sakho futhi kancane siphakamise okhalweni phansi. Yelula izingalo phambili, phakamisa isiqu, intamo, ukudonsa phambili kuya phezulu. Umgede e ngangokunokwenzeka.
Manje, ake welule kwemisipha nokujikeleza kwegazi. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uthole ngamadolo wakho ukuze emathangeni kukhona parallel phansi. Bend phambili, ngokubeka izandla zakho futhi ikhanda phansi.
Ima "ibhuloho '. Uma udinga usizo ngaphandle - ukubuza umndeni wakhe. Lokhu kuyoqinisa yomgogodla futhi sithuthukise ekudleni kwakhe.
Ngokulandelayo, amanga emhlane wakho, beka izandla emaceleni kwakhe. Phakamisa imilenze yakho kanye okhalweni, ukugoba imilenze yakho hudula phansi ngemuva ekhanda ku emadvolo netintwane. Uma kwenzeke ukwenza lesi sivivinyo - Bamba lesi sikhundla ngoba amasekhondi angu-8. Bese nibuyela isikhundla salo esivamile futhi uphumule.
Sukuma ngezinyawo zakho bese uwafake ngendlela yokuthi base njenge ngobubanzi ngangokunokwenzeka. Gobisa umlenze wakho futhi ukubeka unyawo phezu kwethanga lika omunye umlenze. Yelula izingalo ngenhla kwekhanda bese ujoyina izandla. Beka inyawo lakho phezu Sock bese udonsa kuwo wonke umzimba. Ngale ndlela ukulungisa ukuma yakho bese ukhulula abantu imimoya emuva aphansi.
Ngokulandelayo, yima ngezinyawo zakho, uyibeke ububanzi ngaphandle. Bend emaceleni ukufinyelela i isandla iqakala, kanti eyesibili silingo up. Manje, phesheya. Ngakho, ungakwazi yokwelula izinzwa zakho futhi babe nezimo ngaphezulu.
Physiotherapy nge herniated kuqinisa imisipha core, ekunciphiseni ingcindezi yomgogodla.
LFK kuyoqinisa imisipha, ukwandisa umsebenzi wabo, kanye sikhuthaze omzimba omuntu. Isikhathi yokutakula kuyadingeka ukuze unake okukhethekile umsebenzi, ngoba kwaba khona-ke ukuthi anika umphumela esiphezulu nokuzuza, ziyasiza ekuvuseleleni impilo.
Tikhundla ezingxenyeni ezahlukene emgogodleni
Uma inkinga itholakala yomgogodla thoracic, ungaqala ukwelashwa ngisho ehhovisi. Odinga - kuba esihlalweni ephethe ngokuqinile emuva. Beka tandla takho ngemuva ikhanda lakho futhi Arch emuva yakho ukuze ukwazi ukuzizwa yomgogodla onqenqemeni engenhla kwesitulo. Okulandelayo uphume ngokuphepha kuka futhi ukuncika phambili. Yenza umsebenzi izikhathi 3 kuya 4.
Uma une obukhulu beqolo - amanga emhlane wakho, beka izandla zakho emaceleni kwakhe, imilenze ukudonsa. Kancane siphakamise umzimba phezulu, umise amasekhondi 10 futhi kancane kancane, makehle phansi izindlu. Yenza izikhathi 10-15.
Ungenzenjani yomgogodla wesibeletho ahlale esihlalweni, beka izandla zakho emaceleni kwakhe, waphenduka ikhanda lakhe ngapha nangapha 5-10.
Noma yimuphi iqoqo umzimba has Izimo, nokuvivinya umzimba zokwelapha nge umbhunu vertebral akuyona ngaphandle. Awukwazi ukwenza umsebenzi ngisho ukukhanya phakathi nokugula acute, isifo esingelapheki, ukopha, iziyaluyalu zenhliziyo.
Lipoma ekhanda lakhe, kwamanye izingxenye zomzimba